Ungayithenga njani iBitcoin | Ngendlela elula, ekhuselekileyo kunye nexabiso elifanelekileyo
Ungayithenga njani iBitcoin
Uyithenga njani i-Ethereum
Yintoni iBitcoin Cash?
Uyithenga njani i-NEO
Ixabiso leBitcoin kwi-intanethi
Isicatshulwa se-Ethereum kwi-intanethi
Imali ye-Bitcoin Cash kwi-intanethi
Ripple Online Quote
I-Litecoin icaphula kwi-intanethi
Tyala imali kwiBitcoin
Ngaba awukathengi i-Bitcoins okwangoku? Thatha inyathelo kwaye ufumane imali yekamva
Cwangcisa i Bitcoin
Ukuba siyayiqonda i-Bitcoin njengemali, siya kukuqonda oko inokufumaneka njengayo nayiphi na imali. Umzekelo, ngokwamkela iintlawulo okanye iminikelo kwiBitcoin. Iyafana ngqo (okanye iyafana kakhulu) ekufumaneni intlawulo ngeeYuro okanye iiDola. Umane unika umntu inombolo yakho ye-akhawunti yokujonga, ethi, kule meko, yenye yeedilesi zakho isipaji okanye isipaji kwaye umhlawuli uthumela isixa ekuvunyelwene ngaso seBitcoin apho. Ke, ufumana ezo ngqekembe kwaye ungazisebenzisa nanini na ufuna. Inkqubo iyakhawuleza kwaye ibubulumko ngokwahluka okongezelelekileyo ekungekho mntu unokufumana okanye athintele imali yakho. Khumbula, ngeBitcoin uyibhanki yakho.
>> Gcina imali kwiBitcoin NGOKU
Ilula. Jonga, ukuba ufuna ukundinika uvuyo ndithumele iBitcoin (okanye, ewe, iqhezu elithile leBitcoin) kule dilesi: 1AYj85G4nZ87HYCxzMWP5fDaa49EsxG6SU
Ukuba unesitolo se-intanethi kukho iiplagi ezininzi zokufumana iintlawulo kwi-Bitcoin. Oku kuthetha ukuba ungabiza imali ye-fiat njengaphambi kokusebenzisa iindlela eziqhelekileyo: isango lokuhlawula, iPaypal, njl. kwaye kwakhona unike ithuba lokuhlawula ngeBitcoin. Ngokwesiqhelo ezi plugins zenza uguquko kwi-Bitcoin ukusuka kwixabiso ngeeYurophu okanye imali esetyenziswe kwilizwe lakho. Njengokuba, Ukudibanisa unikezela iiplagi kunye namaqhosha entlawulo kumaqonga e-commerce aliqela anje ngeWoocommerce, Magento, Opencart, Prestashop, osCommerce, VirtueMart, VHMCS okanye iZenCart. Kodwa zininzi ezinye, ke kuya kufuneka uthelekise kwaye usebenzise eyona ikulungeleyo okanye kulula kuwe ukuba uyenze. Kwiqonga leWordPress, yenye yezona zisetyenziswa kakhulu, uya kuyifumana inani elikhulu leeplagi. Kuyathakazelisa kakhulu ukunika olu khetho kubathengi bakho kuba, nangona isenokungabonakali ngathi injalo, iya kukuvumela ukuba ume ngaphandle kwezinye iivenkile ezinganikeli olu khetho. Ungalibali ukuba bayanda abantu abasebenzisa imali ye-imali yedatha.
Unokuzibuza ukuba ukutshaja kwi-Bitcoin okanye ezinye i-cryptocurrencies kusemthethweni. Inyani yile yokuba bayakwenza (ubuncinci kumazwe aphucukileyo), njengoko kusemthethweni ukuhlawulwa ngohlobo okanye ngokurhweba. Ukuthengiswa okuhlawulwe kwiBitcoin kuyo nayiphi na imeko kubhengezwe njengokuthengisa okwenziwe kwithenda esemthethweni. Uthengise ngexabiso lama-euro angama-100 nangona ubize i-Bitcoin ngoko akukho ngxaki ukuba ufuna ukuba ne-accounting yakho kwicandelo lezomthetho oqinileyo.
Ungayithenga njani iBitcoin?
Ewe i-Bitcoin inokuthengwa njengayo nayiphi na enye i-asethi yedijithali okanye njengayo nayiphi na enye into ngokubanzi, ihlawule ixabiso layo. Kude kube ngoku ibingeyonto inqabileyo ukuthenga imali kwelinye ilizwe. Amaxesha amaninzi kufuneka sikwenze ukuhamba ukuze siye ebhankini okanye kwindlu yotshintshiselwano kwaye sifumane ezo mali ngokuzihlawulela. Nabani na othengisela kuthi unikezela ngexabiso lotshintshiselwano kwaye ukuba siyavuma siyahlawula kwaye sithathe isixa esimiselweyo semali esiso yenye imali.
KwiBitcoin kukwakho nezindlu zotshintshiselwano Kodwa njengoko ukhetho lweemali kunye ne-cryptocurrensets esinazo zininzi, siya kubona ukuba singatshintshela kwi-Bitcoin kuyo nganye yazo. Ngokusisiseko sinokucinga ngokuthenga i-Bitcoin ngeendlela ezimbini: ngemali ye-fiat okanye ngezinye i-cryptocurrensets.
Tshintshela Bitcoin Ukuze Fiat
Imali ye-Fiat yithenda esemthethweni esetyenziswa kwilizwe lakho okanye ekuhlaleni kumazwe. Kukho izindlu zotshintshiselwano ezikuvumela ukuba ufumane i-Bitcoin kwimali ye-fiat. Inkqubo yesiqhelo kukungena kwemali ye-fiat ngogqithiso lwebhanki okanye enye indlela kwaye sele ikwiakhawunti yethu xa utshintshiselana okanye utshintshiselana singayifumana iBitcoin. Ngokuchasene noko, ukuba sifuna ukuthengisa i-Bitcoin kufuneka sibathumele kuTshintshiselwano kuqala kwaye ukusuka apho sibeke ii-odolo zokuthengisa ngexabiso esifuna ukulithengisa ngqo kumntu ofuna ukuthenga ngexabiso elithile. Makhe sijonge ezinye zezona ndawo zithandwayo:
Coinbase.- lolunye lotshintshiselwano oluphambili apho abantu bathenga iBitcoin. Ngoku ungathenga iBitcoin, iBitcoin Cash, i-Ethereum, kunye neLitecoin.
KrakenYindlu yotshintshiselwano eseMelika evumela Fumana i-Bitcoin ngokuhlawula ngeeYuro, iiDola zaseMelika, iiDola zaseCanada okanye iiYens. I iikhomishini Ukuthenga okanye ukuthengisa kuyahluka ngokomthamo wentengiselwano nganye ukusuka kwi-0% ukuya kwi-0.26%.
I-Bitcoin-Yenye yezona ndawo zinomdla kakhulu kwezotshintshiselwano lwaseYurophu. UngumJamani kwaye usebenze iminyaka ngokuchaneka kunye nokunyaniseka phantse kuhlala kubangelwa ngamaJamani. Inkqubo yahlukile kwiKraken kuba, kule meko, akukho mfuneko yokuba uthumele imali ye-fiat kuTshintshiselwano, kodwa kumsebenzisi oza kukuthengisela iBitcoin. Utshintshiselwano lulinda kuphela iBitcoin kwaye xa umthengisi ephawula ugqithiso lwebhanki olwenziwe ngumthengi njengoko efumene, emva koko ufumana iBitcoin. Ukuba kukho nakuphi na ukungavisisani (umthengisi uthi akalufumananga ugqithiso) kuya kuvulwa inkqubo apho kuya kufuneka ubonakalise ukuba olo tshintshelo lwenziwe kwaye ubone ukuba kwenzeke ntoni. Ngokwesiqhelo akufuneki kubekho ngxaki kwaye, nakweyiphi na imeko, bobabini abathengisi kunye nabathengi bafumana amanqanaba okwanda kwegama xa besenza utshintsho ngaphandle kwengxaki.
Iipaji ezikwi-Intanethi apho unokuthenga kwakhona iBitcoin. Njengokuba, Blockchain.info o Xapo Isipaji Bayakuvumela ukuba uthenge iBitcoins kamnandi, ngesiqhelo ngokudibanisa iakhawunti yebhanki, ikhadi lamatyala okanye ezinye iindlela zokuhlawula kwi-Intanethi.
IBit2me-Yinkampani ezinikele ekuthengeni nasekuthengiseni i-Bitcoin kunye nokulawula ii-ATM zayo ze-Bitcoin. Ingathengwa ngogqithiso lwebhanki, ikhadi letyala okanye ezinye iindlela. Kwakhona thengisa i-Bitcoin kwaye ufumane imali ye-fiat ngokudlulisa okanye i-ATM (iHalcash, kwamanye amazwe; iSpain, umzekelo).
LocalBitcoinLe ndawo sele isebenza iminyaka emininzi kwaye idibanisa abathengi kunye nabathengisi. Ndinyanisa, uthenga kwaye uthengise i-Bitcoin ngokuthe ngqo ebantwini kwi-intanethi okanye ngobuqu. Kungenxa yoko le nto ikubonisa abathengisi abakufutshane nendawo okuyo ukuze udibane kwaye wenze utshintsho. Onke amaqela abandakanyekayo ayinxalenye yenkqubo yodumo. Ukuba ukhetha umthengi-umthengi onodumo oluhle kunye nothintelo oluninzi esele lwenziwe, awunakuba nazingxaki. Ukuthengiswa kwe-Intanethi kuhlala kwenziwa ngokudluliselwa. Ubuso ubuso ngobuso kanye xa sasidibana nomntu ukuba sitshintshe izitikha. Kuba awunakumazi umthengi / umthengisi, kusengqiqweni kwaye kuyacetyiswa ukuba uhlale kwindawo kawonkewonke. Ngokugcina oovimba abasengqiqweni, iiBitcoins zinokufunyanwa okanye zithengiswe ngokulandela ipatheni yothintelo olusisiseko olunokwandiswa kulo naluphi na unxibelelwano kwi-Intanethi.
Mycelium Isipaji.- Sisipaji se-iOS kunye ne-Android esidibanisa ukhetho lokuthenga kunye nokuthengisa iBitcoin zombini ngokudluliselwa kwebhanki, kuthetha ukuba unokusebenzisa ikhadi kwaye ngokuthe ngqo kubasebenzisi abakufutshane.
Kwizinto ezininzi zokutshintshiselana onokuzithenga ngemali ye-fiat kuya kufuneka uzazise ngokupheleleyo ukuze uthenge kwaye uthengise i-Bitcoin. Oku kuthetha ukuba nenombolo yakho yefowuni, idilesi, i-ID, kunye nefoto. Oku kunokuba yinto engathandekiyo kwabanye abantu abangakwaziyo okanye abafuna ukuzazisa; ayithethi kuthi abantu abazimisele ukwenza ulwaphulo-mthetho okanye izinto ezinje. Kukwakho nabaphembeleli abasebenzela inkululeko yokuthetha kumazwe amaninzi apho kungalunganga ukuba imali yabo yaziwe. Ukuba yimfihlo ayisiyiyo kuphela into echaphazela abantu abahlala kakubi. Ngapha koko, xa usebenzisa ugqithiselo lwebhanki okanye ikhadi lebhanki letyala okanye ledebhithi awusaziwa; Ngaphandle kokuba usebenzise ubuqhetseba obukhethekileyo, obukhoyo kodwa ayisiyongxaki yokujongana nalo kweli nqaku.
Thenga i-Bitcoin ngezinye iidigital
Ukuba sele ungumnini weemali ezithile, kulula kakhulu ukuzitshintshela kwi-Bitcoin. Kukwakho nezindlu zotshintshiselwano okanye iiNtengiselwano ezisebenza kuphela ngeemali zedijithali ngendlela yokuba uthumele isipaji sakho esikubonelela nge-imali yedatha okanye i-imali yedatha onayo kwaye ungayithengisa apho ukuze utshintshe iBitcoin.
Poloniex-Utshintshiselwano olusekwe e-USA, yenye yezona zaziwa kakuhle ezisebenza kuphela ngeemali zokukhuphela. Ifuna ukuba ichongwe ngokupheleleyo ukuze isebenze kuyo.
Bittrex.- Enye yezona zinto zibalulekileyo, zikwaseMelika kwaye ezifuna uchongo olupheleleyo ukuze zikwazi ukusebenza. Ukuba umsebenzisi akachongwanga ngokuchanekileyo, akasayi kuba nakho ukufumana nayiphi na imali yedijithali apho; kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo le nto.
Kodwa kukwakho notshintshiselwano nge-cryptocur lwemali esekwe kumazwe anemithetho emininzi ye-lax ethi, ngokubanzi okanye okomzuzwana, ayifuni kuchongwa ngokupheleleyo kwabasebenzisi bayo, umzekelo:
Binance y Kucoin Zimbini iiTshintshiselwano zaseTshayina ezibonakala zisebenza ngaphandle kweengxaki nabasebenzisi bazo abasekwe ngaphandle kwe China. Zombini zikwanesicelo sezixhobo eziphathwayo ekulula kuzo ukusebenza ukuba unolwazi olusisiseko malunga nendlela yokuthenga kunye nokuthengisa kwezi ntlobo zeesayithi. Zonke zisebenza ngendlela efanayo kwaye indawo yazo yemizobo iyafana.
Inkqubo yokuthenga kunye nokuthengisa kuTshintshiselwano ilula kunokuba kubonakala ngathi asingeni kwiindlela zokurhweba eziphucukileyo. Utshintshiselwano lubonelela ngezipaji zobuqu zazo zonke ii-cryptocur lwemali abazamkelayo. Abasebenzisi bathumela i-crypto yabo kwidilesi ye-wallet yabo kwi-Exchange. Nje ukuba babe lapho, ungabathengisela iBitcoin, i-Ether, kwaye mhlawumbi nezinye ezimbalwa. Kwimeko ye-Binance, banemali yabo edweliswe kwintengiso yabo kwaye inokufunyanwa phantse ngayo nayiphi na enye i-cryptocurrensets, ebizwa ngokuba yi-BNB. I-BNB ingasetyenziselwa ukuhlawula iifizi zokuthengiselana.
IiSayithi ezikuvumela ukuba utshintshise ezinye ii-cryptocurrencies kwabanye ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesidingo sokwazi. Uthumela i-cryptos ngokulula kwidilesi abakunika yona, bonisa idilesi apho ufuna ukufumana i-Bitcoin (okanye imali yedijithali oyikhethileyo phakathi kokukhetha) kwaye yonke inkqubo yenziwa ngexesha elincinci, ngesiqhelo imizuzu embalwa. Imizekelo yezi ndawo zezi:
Changelly-Ibonelela ngababini bokutshintshiselana phakathi kwee-cryptocurrensets ezininzi kwaye unokuthenga ngeedola okanye i-euro usebenzisa ikhadi lekhredithi.
Uhlobo lwesimot.- isebenza kuphela nge-cryptocurrensets kwaye ayifuni kubhaliswa.
FlypMe.- ayifuni kubhaliswa kwaye ibandakanya inani elandayo lemali ezifihlakeleyo.
Ukubeka iingcango ebaleni, uyazi, kunzima. U-Bitcoin wazalwa enombono wokuzisa inkululeko kwihlabathi lezemali, ukwenza inkululeko yedemokhrasi kunye nokubonelela wonke umntu ngeenkonzo de kube ngoku kuphela kulawulo lweebhanki.. Ke ngoko, ngaphandle kweminqweno engapheliyo yokulawula ii-cryptocurrensets, zichonge abasebenzisi kwaye uzame ukuzigcina ziphantsi kolawulo lwamazwe, izinto azibonakali zilula. Iidilesi zesipaji phantse azichazwanga kwaye akukho lula ukuzidibanisa nabantu abanegama lokuqala kunye nelokugqibela ngaphandle kokuba utyhile ngokwakho. Utshintshiselwano olukhulelweyo njengeenkampani ezinamagama eshishini elikwindawo ethile okanye ilizwe elinokulawulwa. Ngokwendalo, naliphi na ilizwe lingacela idatha kunye nokuthengiselana kwabo basebenza kolu Tshintshiselwano phantsi kwesigwebo sokuvala ishishini. Kwaye andithandabuzi ukuba le iyakwenziwa. Nangona kunjalo, akukho lula kangako ukulawula ukuthengiselana phakathi kwabantu okanye abo baqhutywa yindlela endiyichaze njenge "utshintsho kubhabho." Njengokuba oko akwanelanga, siza kuphila ukuvela kotshintshiselwano olusemthethweni ukuba, kuba bengabhaliswanga kulo naliphi na ilizwe kwaye bane-P2P (peer to peer) ukutshintshiselana ukusuka kumsebenzisi ukuya kumsebenzisi kwaye igcinwe yinethiwekhi yamaseva asasazwe kwihlabathi liphela ... izinto kunzima ukuzilawula njengeefayile zeTorrent isetyenziselwa ukutshintshiselana ngeefayile zedijithali.
Umcimbi osisiseko kuphuhliso lotshintshiselwano olusemthethweni kukhuseleko kunye nokuthembana. Ayisiyiyo kuphela eyakha inkqubo enegama eqhuba ubudlelwane phakathi kwabasebenzisi, kodwa kunokwenzeka ukubabonelela ngamanyathelo okhuseleko anamandla njengalawo otshintshiselwano lwendawo enye. Ngokusebenzisa ii-wallet ezityikityiweyo ezininzi kuyenzeka ukuba kukhuselwe ii-cryptocurrensets ukuze zitshintshwe ukuze zinikezelwe kuphela xa kusenziwa intengiselwano yokuqala ngemvume yamalungu amabini ubuncinci. Kodwa kusekho okuninzi, iimodeli ziyaphuhliswa apho kunokwenzeka khona ukutshintshiselana ngeasethi ye-crypto phakathi kweebhloko ezahlukeneyo zebhloko (ii-atomic swaps) iimvumelwano ezifanelekileyo ezingadingi ungenelelo lomntu ukuze intengiselwano yenziwe ngokuthembekileyo nokhuseleko olupheleleyo.
Okwangoku, ukutshintshiselana okwabiweyo kuninzi okanye kuncinci kwisigaba sokuqala sophuhliso, ke okwangoku akusebenziseki kubasebenzisi abaninzi. Nangona kunjalo, kulungile ukuba ujonge iimephu zakho zendlela kuba rBonakalisa ikamva lokwenyani lotshintshiselwano nge-imali yedatha. Makhe sibone ezinye zeeprojekthi:
upcoinOkwangoku kwisigaba se-beta kunye nocwangciso lokuqalisa ngokusesikweni ukuba kwinkonzo epheleleyo nge-Matshi 2018. Iya kubonelela ngoluhlu olukhulu lweemali ezixabisekileyo zokutshintshela iikhomishini eziphantsi ngokwenene. Iqela lakho lophuhliso lipapasha inkqubela phambili yemihla ngemihla Iqela lakho leTelegram.
Ethos-Iya kuba sisipaji sendalo iphela, inethiwekhi yokunxibelelana kunye neqonga lotshintshiselwano lomntu nolomntu. Ngawo onke amaxesha amaqhosha abucala ee-asethi zakho zedijithali okanye ii-cryptocurrensets zihlala elugcinweni lwakho, nto leyo umahluko obalulekileyo xa kuthelekiswa notshintshiselwano lwendawo enye. Iqela leTelegram.
amaza.- Ungomnye wabo banikezela kakhulu ukuba bathethe, benza ulindelo oluhle kakhulu. Kwinqanaba le-beta, ukuhanjiswa kweyona nto inqwenelekayo kucwangciselwe ukwenzeka kuyo yonke i-2018. Iqela leTelegram.
BitsharesIsebenza ngendlela engamkelekanga ngako oko kuya kuba kuhle ukuba siyeke ukuyivavanya kancinci. Ukuba nguTshintshiselwano olusasazeke ngokupheleleyo, xa ubhalisa, kuya kufuneka unikele ingqalelo ekugcineni iphasiwedi oyivelisela le nkqubo. Akukho mntu uya kuba nakho ukukunceda ufumane iakhawunti yakho ukuba ulahlekile. Inkangeleko yoTshintshiselwano ifana kakhulu nazo zonke ezinye
Kwaye, ngokwendalo, kuya kufuneka wenze idiphozithi yedijithali ofuna ukuyisebenzisa ukuthenga enye kwidilesi ebonelelweyo.
Ukusebenza kolu hlobo loTshintshiselwano kusekwe kwinto yokuba abasebenzisi batshintshisa amathokheni axhaswe yimali eyinkunzi yeedijithali eziye zalayishwa. Kufana neqhinga elincinci lomlingo elinika ukhuseleko olukhulu kwaye lenze ukuba kube lula ukusebenza kwenkqubo. Ayisiyonto intsha ukuba ucinga malunga neetshiphusi kwikhasino. Xa ungena kwikhasino utshintshiselana ngemali ngeetshiphusi, udlala ngazo kwaye xa ushiya utshintsha iichips ngemali kwakhona. Le yinto efanayo.
Gcina ukhumbula, nangona kunjalo, ukuba utshintshiselwano olusemthethweni luyinto entsha ngokupheleleyo, uninzi lwazo lukwisigaba se-beta okanye uvavanyo, kwaye indawo yokufunda ukujongana nayo inde kakhulu kunotshintshiselwano lwendawo enye.. Nangona kunjalo, izibonelelo zicacile: kwelinye icala, ulawulo olukhulu kwii-cryptocurrensets zakho kwaye, kwelinye icala, ukuba akukho mfuneko yokuzazisa ukuba uza kusebenza nokuba ayizizo iiNtengiselwano ezinokuvalwa ngokwesicelo se Urhulumente. Ngokubanzi, ukutshintshiselana okwabelwe amagunya kukhuseleke ngakumbi kwaye kuthembekile kunendawo esembindini kwaye, ngokucacileyo, lulwazelelo lwendalo lwezi. Ke ngoko, kubalulekile ukuba unike inkqubela phambili kuphuhliso lwabo, nangona ndingacebisi, nokuba, ukuba uzisebenzise ukuba awukabi nako ukuziva ukhululekile okanye unamava ngeendlela "zesiko" zokutshintshiselana ngeemali zokukhusela.
Zininzi iiprojekthi eziqhubekayo okanye eziphuhliswayo. Abanye basebenza kwi-Intanethi kwaye abanye bafuna ukufakwa kwesoftware ethile: IBarterdex, CryptoBridge… Ngokuqinisekileyo oku kuqhubela phambili ngokukhawuleza kunokuba sinokubhala ngokufanelekileyo; kodwa asizukuyeka ukukubonisa eyona iluncedo kunye neyona iluncedo ukusuka apha.
1 Tyala imali kwiBitcoin
2 Ungayithenga njani iBitcoin?
3 Tshintshela Bitcoin Ukuze Fiat
4 Thenga i-Bitcoin ngezinye iidigital
5 Utshintsho kubhabho
6 Yintoni ezayo